Maxay tahay sababta uusan Karim Benzema mar walba ugu dhawaaqin Erayada Heesta Calanka Faransiiska!? – Gool FM
(Paris) 30 Juun 2021. Kulan wacan oo wanaagsan aqristayaasheenna sharafta leh, kuna soo dhowaada warbixin yar oo xiiso leh oo ku saabsan sababta weeraryahanka xulka Faransiiska iyo kooxda Real Madrid ee waddanka Spain Karim Benzema mar walba uusan u qaadin ama ugu dhawaaqin erayada heesta calanka faransiiska ee ciyaartoydu wadajirka u qaadaan inta aysan kulammada ciyaareed billaaban.
6 sanadood kaddib waxaa dhowaan xulka qaranka Faransiiska markale dib loogu soo celiyay weeraryahan Karim Benzema oo kolkii hore xulka looga eryayay fadeexad la xiriirtay jinsi galmo ah iyo muuqaallada cajalado anshax darro ah oo laga helay isaga iyo qaar ka tirsan xiddigaha faransiiska oo uu ka mid ahaa Mathieu Valbuena, isagoo kulankii ugu horreeyay dhowaan u ciyaaray xulka Les Bleus ee Faransiiska ciyaartii Qarammada Yurub ee ay kaga hor tageen Germany oo ay 1-0 uga adkaadeen, waxaana uu sidoo kale ku soo bilowday kulankii labaad ee heerka Guruubyada oo ay barbaro 1-1 ah la dhaafi waayeen Hungary.
Waqti badan kuma qaadan Benzema inuu ka dhex muuqdo xulka Faransiiska isagoo gool dhaliyay kulankii barbaro 2-2 ay la galeen dhiggooda Portugal ee EURO 2020, hase yeeshee dib ugu soo celintiisa xulka Faransiiska ayaa waxay qabsatay ra’yul caamka Faransiiska oo ku kala qaybsamay ku soo celinta Benzema ee safka Faransiiska, waxaana dadka qaar ay taageereen go’aankan, halka dad kale oo Faransiis ahna ay shaki geliyeen inuu u qalmo inuu ka mid ahaado xulka, iyagoo ku eedeeyey in uusan ahayn mid daacad u ah Faransiiska, waalidiintiisuna ay Carab yihiin.
Benzema waxa uu sanadkii 1987-kii ku dhashay Magaallada Lyon ee Waddanka Faransiiska, waxaana iska dhalay Hooyo iyo Aabbe Algerian ah oo lagu kala Magacaabo Wahida Djebbara iyo Hafid Benzema.
Benzema ayaa lagu xusuustaa in ka hor intii aan xulka laga joojin iyo kaddibba uu yahay mid aan ku dhawaaqin erayada ku jira heesta calanka Faransiiska oo ciyaartoyda kale ee saaxiibadiisa ah ay ku dhawaaqaan ciyaar kasta ka hor, balse isagu uu afka xirto.
Haddaba miyaa la dhihi karaa Benzema isla weyni ayuu u diidayaa inuu ku dhawaaqo heesta calanka Faransiiska?, mise wuxuu u diidayaa maadaama labadiisa Waalid ay Algerian yihiin? Ma waxaa jira waxyaabo kale oo ku xambaaraya in uusan afka u kala furin erayada heesta Calanka Faransiiska? Su’aalahaas oo dhan waxaan kaga jawaabi doonnaa warbixintan.
Warbaahinta Faransiiska ayaa dib u soo nooleeysay arrinta ku aaddan sababta uu weli Benzema u diiddan yahay inuu ugu dhawaaqo eryada heesta Calanka Faransiiska iyadoo nasiibku u saaciday in 6 sano kaddib markale lagu soo daro ciyaartoyda xulka qaranka Faransiiska ee ka qeyb galay Euro 2020, inkastoo xulkiisa la reebay.
Xaqiiqadu waxay tahay in sababta uu Benzema uga aamuso heesta calanka Faransiiska aysan ahayn isla weyni isaga u gaar ah, ama mid xiriir ah la leh asalkiisa Algerian-ka ah, hase yeeshee waxa uu ku diiday maadaama erayada heesta calanka Faransiiska ay ka mid yihiin qaybo ku baaqaya dagaal, isla markaana uu u arko in heestani aysan ku haboonayn ciyaaraha kubadda cagta, maadaama ay ka hadlayso colaad, dhiig daadin iyo qoor gooyo.
Sanadkii 2018-kii ayaa wareysi gaar ah oo uu Benzema siiyay Jariiradda ‘Marca’ ee ka soo baxda Spain ayaa lagu weydiiyay su’aallo dhowr ah oo la xiriiray xirfaddiisa kubadda cagta, xilligaas oo uu Benzema weli ka maqnaa xulka Faransiiska.
Su’aalihii uu wargeysku weydiiyay Benzema waxaa ku jirtay sababihii uusan ugu dhawaaqi jirin heesta Calanka Faransiiska wixii ka horreeyay 2015-kii xilligaas uu ka mid ahaa ciyaartoyda xulka Faransiiska, waxaana Karim Benzema uu ku jawaabay: “Haddii aad si wanaagsan u dhegeysato erayada heesta Calanka Faransiiska waxaad ogaanaysaa in heestani ay ku baaqayso dagaal, waana wax aan anigu marnaba jecleyn”.
Haddii aan wax yar ka taabanno erayada uu dhibsaday Benzema ee ku jirta heesta calanka Faransiiska waxay oranaysaa: “Maalinteenna sharafta leh ayaa timid, aan kaga hor tagaynayno calanka dhiigga leh ee daalimiinta… ma maqashaan guuxa askarteenna naxariista daran, way soo socdaan si ay qoorta uga jaraan wiilashiinna/inamadiinna”.
Marka aad erayadaa maqashay waxaan filayaa in aad Benzema ku raacsan tahay inuu iska diido inuu dhawaaqo erayada heesta Calanka Faransiiska?.
Bal u kaadi oo ha deg degin, waayo Benzema oo qura ma ahayn ciyaartoydii diidday inay qaadaan heesta Calanka Faransiiska, waxaana sida Benzema oo kale heesta calanka Faransiiska lagu kari waayay xidiggii hore ee Faransiiska Michel Platini oo lagu naaneyso ‘Diiqii reer Faransa’, kana mid ah laacibiintii ugu fiicnaa ee soo maray xulka qaranka Faransiiska.
Isla sanadkii 2018-kii ayaa Michel Platini waxa uu ka hadlay sababtii uu isaga qudhiisu ku diidi jiray inuu qaado heesta Calanka Faransiiska, waxaana uu yiri “Waxay ila tahay in Karim Benzema uu ku saxan yahay in uu ka aamuso heeska Calanka Faransiiska, aniga iyo jiilkeyga sanadihii siddeetameeyadii waxaan iska diidnay in aan qaadno heesta calanka, ma garanaysaa sababta aan ku diidnay heesta Calanka? Maxaa yeelay waxay ku baaqaysaa colaad, waxayna la xiriirtaa dagaal, annaguna dagaal ma aanan qaadeyn ee laakiin waxaan ka qayb qaadanaynay ciyaaro kubadda cagta ah, haddii heesta Calanka Faransiisku ay ku qotomi lahayd dal jaceyl waan ku heesi lahaa shaki la’aan”.
Intaas waxaan ku soo koobeynaa warbixintii aan ka diyaarinnay sababta uu Karim Benzema u diiday inuu ugu dhawaaqo erayada heesta calanka Faransiiska inta aysan bilaaban kulammada ciyaaraha kubadda cagta ee uu dheelayo xulkiisa.
Ra’yigaaga ka dhiibo sidee ayuu kuula muuqdaa go’aanka ciyaaryahan Karim Benzema.?